साताको अन्तिम कारोबार दिन ७.५ अंक बढेर बन्द भयो नेप्से
१ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल पुनर्बीमाको
साउन १५, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार शेयर बजार ७ दशमलव ५३ अंक बढेर बन्द भएको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १ हजार ४३९ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा पुगेको हो ।
१ हजार ४३३ दशमलव १४ विन्दुबाट खुलेको बजार बिहीवार अधिकतम १ हजार ४३७ दशमलव ९७ र न्यूनतम ं१ हजार ४२१ दशमलव शून्य ८ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
यस दिन १८९ ओटा कम्पनीको २१ हजार ८१८ पटकको व्यापारमा रू. १ अर्ब ३२ करोड २ लाख ६६ हजार बराबरको ३४ लाख ३० हजार ५३२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । कुल कारोबारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ओगटेको छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन उक्त कम्पनीको रू. २२ करोड ९१ लाख ५५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ८ करोड ९५ लाख ५६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी १० प्रतिशतले बढेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य अंकितमूल्यभन्दा आधा कम रहेकोमा बिहीबार प्रतिकित्ता रू. ५ ले वृद्धि भई रू. ५५ कायम भएको हो ।
बिहीवार सबैभन्दा बढी गुमाउने अर्थात् मूल्य घट्ने कम्पनीमा घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य रू.९० ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ८२४ कायम भएको छ । बिहीवारको कारोबारमा ४७ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ भने १२४ ओटा कम्पनीको बढेको छ ।
यो दिन ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव १५ प्रतिशत बढेर ३०० दशमलव ९५ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबारमा आएका १२ ओटा समूहकै पहिसूचक हरियो भएर बन्द भएको छ ।
यस दिन बैंकिङ् समूहको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत, व्यापारिक समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य ७७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।